ညီအကို အရင်းတွေလိုခင်မင်ရပြီး ဇာတ်ပို့တွေအပေါ်ချစ်လွန်းတဲ့ လွင်မိုးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင် – Suehninsi
အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို အခိုင်အမာသိမ်းပိုက်ထားကြတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ ဟာသဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့ အားလုံးရဲ့ရင်ထဲနေရာယူထားတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ကလည်း
အပါအဝင်ပါပဲ..။ ဇာတ်ပို့နေရာကနေ ကျရာဇာတ်ရုပ်တွေကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အပီပြင်ဆုံး သရုပ်ဆောင်ဖန်တီးနိုင်တာမို့လည်း ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းက ယနေ့အချိန်ထိ အောင်မြင်စွာရပ်တည်နိုင်ပြီး ဇာတ်ကားပေါင်းမြောက်များစွာကို ရိုက်ကူးသရုပ်ဆောင်ထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ခင်လှိုင်ဟာဆိုရင်
စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝသူဖြစ်ပြီး ဖော်ရွေတတ်သူမို့ မြင်သူတိုင်းရဲ့ ချစ်ခင်မှု မေတ္တာကို ရရှိတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်ခင်ကြသူတွေများထဲမှ သရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီး ဦးလွင်မိုး ကလည်း အပါအဝင်ပါ။ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို အတူလက်တွဲရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ခင်လှိုင်နဲ့ လွင်မိုးတို့နှစ်ယောက်က
ညီအစ်ကို အရင်းတွေလို ခင်မင်ကြတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လှိုင်က နှစ်ယောက်အတူပုံလေးကို လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ဝေမျှလာရင်း ” ကျွန်တော်တို့လို ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေ…ဟာသသရုပ်တွေလူရွှင်တော်တွေကို..ချစ်လွန်းလို့ ပြောမနာဆိုမနာလည်ပင်းဖက်ပေါင်းတတ်တဲ့…ညီအကိုအရင်းတွေလိုချစ်ရတဲ့
ဘော်ဒါကြီး ကိုလွင်မိုးနဲ့ဒီနေ့ပြန်ဆုံတွေခဲ့ပြီးစကားတွေရေပက်မဝင်ပြောခဲ့ရတာ …အလွန်ပျော်တယ်ဗျာ…ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် .ချစ်သူငယ်ချင်းကြီး…ဂျိမ်းစဘွန်းရေ ” ဆိုပြီး ရေးသားလာတာကြောင့် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…. ။
အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတှကေို အခိုငျအမာသိမျးပိုကျထားကွတဲ့ ပွညျသူ့အခဈြတျောအနုပညာရှငျတှထေဲမှာ ဟာသဇာတျရုပျတှနေဲ့ အားလုံးရဲ့ရငျထဲနရောယူထားတဲ့ ဇာတျပို့သရုပျဆောငျ ခငျလှိုငျကလညျး
အပါအဝငျပါပဲ..။ ဇာတျပို့နရောကနေ ကရြာဇာတျရုပျတှကေို အကောငျးဆုံးနဲ့ အပီပွငျဆုံး သရုပျဆောငျဖနျတီးနိုငျတာမို့လညျး ဆယျစုနှဈတှကေတညျးက ယနအေ့ခြိနျထိ အောငျမွငျစှာရပျတညျနိုငျပွီး ဇာတျကားပေါငျးမွောကျမြားစှာကို ရိုကျကူးသရုပျဆောငျထားသူပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။ ခငျလှိုငျဟာဆိုရငျ
စိတျသဘောထား ပွညျ့ဝသူဖွဈပွီး ဖျောရှတေတျသူမို့ မွငျသူတိုငျးရဲ့ ခဈြခငျမှု မတ်ေတာကို ရရှိတာလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ခဈြခငျကွသူတှမြေားထဲမှ သရုပျဆောငျ မငျးသားကွီး ဦးလှငျမိုး ကလညျး အပါအဝငျပါ။ ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာကို အတူလကျတှဲရိုကျခဲ့ဖူးတဲ့ ခငျလှိုငျနဲ့ လှငျမိုးတို့နှဈယောကျက
ညီအဈကို အရငျးတှလေို ခငျမငျကွတာလဲ ဖွဈပါတယျ။ ခငျလှိုငျက နှဈယောကျအတူပုံလေးကို လူမှုကှနျယကျထကျမှာ ဝမြှေလာရငျး ” ကြှနျတျောတို့လို ဇာတျပို့ဇာတျရံတှေ…ဟာသသရုပျတှလေူရှငျတျောတှကေို..ခဈြလှနျးလို့ ပွောမနာဆိုမနာလညျပငျးဖကျပေါငျးတတျတဲ့…ညီအကိုအရငျးတှလေိုခဈြရတဲ့
ဘျောဒါကွီး ကိုလှငျမိုးနဲ့ဒီနပွေ့နျဆုံတှခေဲ့ပွီးစကားတှရေပေကျမဝငျပွောခဲ့ရတာ …အလှနျပြျောတယျဗြာ…ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ .ခဈြသူငယျခငျြးကွီး…ဂြိမျးစဘှနျးရေ ” ဆိုပွီး ရေးသားလာတာကွောငျ့ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ…. ။